၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ( ၄ ) ရက်
အခမ်းအနားသို့ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးဝင်းခိုင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ် ဦးလှမိုးအောင်၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဌ ဦးအောင်ကျော်ခိုင်၊ ဒုတိယဝန်ကြီးဒေါက်တာထွန်းနိုင်၊တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဌ၊ လျှပ်စစ်နှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီးဌာနမှ တာဝန်ရှိ သူများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ မလေးရှားနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Zahairi Baharim နှင့် ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော် များ၊ PETRONAS CARIGALI MYANMAR Inc. မှ Vice President Mr.Chen Kah Seong နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ UNOG Pte. Ltd နှင့် Petroleum Brunei Myanmar (PBMA) ကုမ္ပဏီတို့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဒေသခံ ပြည်သူများ တက်ရောက်ကြပါသည်။
ရှေးဦးစွာ ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ်နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ဒုတိယဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးဉာဏ်ထွန်း မှ တွင်းတူးဖော်ရသည့် ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်း တင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်တို့မှ စိန်စည်တော် တွင်းအမှတ် (၁) ကို E09 တွင်းတူးစက်ဖြင့် စက်ခလုတ်နှိပ်၍ စတင်တူးဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။ ၎င်းနောက် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကို အထူးဂရုပြု၍ ဆောင်ရွက်ကြရန် မှာကြားခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် တို့မှ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း တာဝန်ရှိဝန်ထမ်းများအား သစ်သီးခြင်းလက်ဆောင်များ ပေးအပ်ခဲ့ပါသည်။
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတခရိုင်၊ မြန်အောင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိသော ကုန်းတွင်းပိုင်း လုပ်ကွက် IOR-7 ရွှေပြည်သာရေနံမြေတွင် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းနှင့် PETRONAS CARIGALI MYANMAR Inc. ၊ UNOG Pte. Ltd နှင့် Petroleum Brunei Myanmar (PBMA) ကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်း၍ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ရှာဖွေ၊ တူးဖော် ထုတ်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ရေနံတိုးတက်ထုတ်ယူရေးစာချုပ် (Improved Petroleum Recovery, IPR) ကို ၁၆-၉-၂၀၁၄ ရက်နေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပြီး လုပ်ကွက်အတွင်း 3D ဆိုက်စမစ် တိုင်းတာခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ တိုင်းတာမှု ရလဒ်များအရ ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ခိုအောင်းနိုင်သည့် အလားအလာများ တွေ့ရှိသဖြင့် စိန်စည်တော် တွင်းအမှတ် (၁)ကို တူးဖော်ခြင်းဖြစ်ပြီး ရည်မှန်းအနက်ပေ ၈,၀၃၉ ပေအထိ တူးဖော်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ကုန်းတွင်းလုပ်ကွက်အမှတ် IOR-7 တွင် မြန်မာ့ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်းမှ ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင် ရွှေပြည်သာရေနံမြေအဖြစ် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ရေနံတွင်းပေါင်း (၇၀) အထိ တူးဖော်ခဲ့ကာ ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့များကို ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၄င်း ရွှေပြည်သာ ရေနံမြေမှ စုစုပေါင်း ရေနံစိမ်းစည် (၄) သန်းခန့်နှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေ သန်းထောင်ပေါင်း (၉၂) ခန့်အား ထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ဆက်လက်၍ မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်အဖွဲ့သည် ရွှေပြည်သာရေနံမြေသို့ ရောက်ရှိရာ ရှင်းလင်းဆောင်တွင် ရေနံမြေမှ တာဝန်ရှိသူမှ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ မြန်မာ့ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ဆက်လက်၍ အမှတ်(၅) ဓာတ်မြေသြဇာစက်ရုံ (ကန်ကြီးထောင့်)၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို စက်ရုံမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး မြန်မာရေနံဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်း ဦးဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြပါသည်။ ထို့နောက် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံ (မြန်အောင်) ၏ ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေမှု အခြေ အနေများကို စက်ရုံမှူးမှ ရှင်းလင်းတင်ပြရာ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း ဦးဆောင် ညွှန်ကြားရေးမှူးမှ ဖြည့်စွက် ရှင်းလင်းတင်ပြကြပါသည်။ တင်ပြမှုများအပေါ် ဒုတိယဝန်ကြီးမှ ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးတင်ပြရာ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ လိုအပ်သည်များအား လမ်းညွှန်မှာကြားခဲ့ပါ သည်။